Izindaba - Iqiniso ngamathebula ekhofi nokuthi kungani uludinga
Sihlala sithola imibuzo, futhi okunye esivame kakhulu ngukuthi udinga itafula lekhofi. Buza noma yimuphi umklami wangaphakathi bazokutshela, sebenza ifomu lamacilongo kuzo zonke izimo. Kungani udala igumbi elihle uma ungasoze walisebenzisa? Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthola ukuthi uzosisebenzisa kanjani isikhala ngaphambi kokuqala ukuthenga. Ekamelweni lakho lokuphumula, kungenzeka ukuthi ubukele ithelevishini, ubungaza abangane, futhi uziphumulele nomndeni. Igumbi elenzelwe ukunethezeka.
Faka itafula lekhofi. Ngemuva kokuhlala kwakho, kuyisiqeshana esibaluleke kakhulu egumbini lakho lokuphumula ngoba liphethe iziphuzo, okukude, okokufunda, futhi kuyindawo yokubeka izinyawo zakho. Wonke amagumbi okuphumula adinga elilodwa, futhi silapha ukukuhambisa ngalokho okufanele ucabangele ngaphambi kokukhetha elilodwa.
1. Usayizi Wethebula Lekhofi
Itafula lakho lekhofi kufanele libe phakathi kwamasentimitha angu-14-18 ukusuka kunoma yiziphi izihlalo ezihlanganisiwe, futhi lingabi ngaphezu kwamasentimitha angama-24. Ngakho-ke uma usubeke phansi ipulani lakho, kufanele ukwazi ukubona ukuthi uzodinga itafula lekhofi elingakanani.
Kumakamelo okuhlala amakhulu kakhulu, cabanga ukusebenzisa amatafula amabili ekhofi eduze komunye nomunye. Noma uma igumbi lakho lokuhlala lingeyona indlela yokudlula, ungaya ngisho nangaphezulu.
2. Cabanga ngeSimo
Izikhala ezahlukahlukene nezakhiwo zibiza ubujamo obuhlukile, kepha nakhu okumele ucabange ngakho. Ngokuhlelwa okuvaliwe kakhulu, isikwele noma unxande kusebenza kahle.
Uma igumbi lakho lokuphumula lidlula, futhi uzohlala uhambahamba etafuleni lekhofi, nxazonke zisebenza kahle.
Ngobuhle, sithanda ukulinganisela ubujamo obuyindilinga nobesikwele esikhaleni, ngakho-ke uma izingcezu zakho eziningi zefenisha ziyizikwele (cabanga usofa onezingalo ze-tuxedo, indawo yomlilo eyisikwele, namatafula ohlangothini ayisikwele), itafula lekhofi eliyindilinga lenezela ibhalansi. Ngenye indlela, uma unezingalo ezisongekayo kwifenisha yakho, isibuko esikhulu esiyindilinga, namatafula asemaceleni, itafula eliseceleni lesikwele noma elingunxande lisebenza kahle. Konke kumayelana nokulinganisela.
3. Qedela Igumbi
Alikho igumbi okufanele lisebenzise ukuqeda okufanayo kuyo yonke indawo, ngakho-ke njengokumila, itafula lekhofi kungaba yindlela yokuletha okuthile okusha esikhaleni sakho. Uma unendwangu ye-nubby kusofa wakho noma izakhi eziningi ze-rustic, itafula lekhofi elicwebezelayo noma elicwebezelayo lizoqhathanisa lokho kuthungwa okunzima. Noma uma uzosebenzisa igumbi lakho lokuphumula ekubukeleni i-TV, khetha isiphetho ongeke ukhathazeke ngokubeka izinyawo zakho, njengokhuni olubunjiwe kancane noma i-ottoman ephakanyisiwe.
4. Ukwenza Isitayela Sakho Sekhofi
Lapho usukhethe itafula lakho lekhofi, cabanga ngezinsiza. Ekamelweni lomndeni lapho ubuke khona i-TV, uzofuna ukushiya isikhala esiningi sokuphakamisa izinyawo nokubeka iziphuzo. Itafula lekhofi elineshalofu eliphansi lisebenza kahle kulezi zikhala ngoba ungabeka izincwadi namathileyi ngaphansi, ushiye indawo eningi ngaphezulu.
Gcina zonke izesekeli ziphansi, ngoba ufuna ukwazi ukubona ngaphezulu kwazo. Noma yini ende kakhulu izovimba umugqa wakho wombono.
Faka izinto ezibalulekile: okokufunda, ibhokisi lezicubu, ama-coasters, ibhokisi lama-remotes, ikhandlela, amabhuku amameshi, noma yini enye ozoyisebenzisa kaningi ingakhonjiswa.
5. Ama-Ottoman namaqoqo
Manje, akuwona wonke amagumbi okuhlala okufanele abe "netafula lekhofi" - ngamanye amagama, ungasebenzisa i-ottoman, ipouf, noma iqoqo lamatafula asemaceleni amancane ezimweni ezithile. Into ebalulekile ukuthi unokuthile okukulesi sikhala sokusebenza - i-ottoman, amatafula amabili ohlangothini noma amathathu ahlanganiswe ndawonye, ​​noma itafula eliphakeme lokuphakama kwe-cocktail lonke lingasebenza ngokuya ngokuthi uzoyisebenzisa kanjani indawo yakho yokuhlala.
6. Amathebula ekhofi kanye nama-sectional
Uma unesigaba, ungaya etafuleni lakho lekhofi ngokuhlukile. Izigaba eziningi zinesihlalo kwesinye noma zombili iziphetho, ngakho-ke mhlawumbe ngeke ubeke izinyawo zakho etafuleni lekhofi. Lokhu kukunika ithuba elingaphezulu lokusebenzisa amatafula engilazi noma ensimbi. Ungahamba futhi ube mncane lapha ngoba azoba mancane amathrafikhi futhi angajabulisi kangako.